ဆူးညောင့်ခလုတ်မှ လွတ်မြောက်ခြင်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဆူးညောင့်ခလုတ်မှ လွတ်မြောက်ခြင်း…	7
Posted by Ko out of... on Aug 22, 2016 in Creative Writing |7comments
– လူ့ဘ၀မှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျ မိမိ၏ပရိယေသန၀မ်းရေးကိစ္စအတွက်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရေးအရာကိစ္စအတွက်တွေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်
ကာယ၊၀စီ၊မနော ဆိုသည့် ကိုယ်နှုတ်နှလုံးတွေနဲ့လူအများကိုဆက်ဆံကြရပါတယ်…
ထိုသို့ဆက်ဆံသည်အခါ သူ့ကိုအမှန်တကယ်သိစေချင်တာလား? ငါသူ့ထက်သိတယ်ဆိုပြီး အပေါ်ဆီးရဖို့ဆက်ဆံတာလား?
သူသိမြင်တာနဲ့ ငါသိမြင်တာ တူလား မတူလား နှိုင်းယှဉ်ချင်လို့ဆက်ဆံတာလား? သူ့ကိုသွေးထိုးစမ်းသပ်ဖို့ ဆက်ဆံတာလား?
သူပြောတာကိုငါ ခေါင်းငြိမ့်ပြီး နားထောင်ဖို့လား? စသည့်စသည့် ဆက်ဆံရေးတွေ
အဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့ဆိုတာ အပိုအလိုမရှိ ဟန်ဆောင်မှုကင်းကင်း အမျော်အကြောက်ကင်းကင်းနဲ့ ဆက်ဆံကြမယ်ဆိုရင် ပဋိပက္ခတွေ၊ ပြသနာတွေ အတော်သက်သာမယ်လို့မြင်မိပါတယ်….
ကျွန်တော်ဟာ ဒသနတခုကြောင့် တချိန်တုံးက သူများကိုသိစေချင်သည့် စိတ်တခုတည်းကြောင့် ဆက်ဆံရေးမှာ ခလုတ်ခတင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်…
ဒီခလုတ်ခတင်းဆူးညောင့်ခလုတ်ဟာ ကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ဖြစ်လာတာလား? သို့မဟုတ်
သူ့နဂိုမူလက ရှိနေသည့်အရာလား? ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော့် ပြန်မေးကြည့်သောအခါ…
ဒီဆူးညောင့်ခလုတ်တွေကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုတာ သူ့ကိုခလုတ်တိုက် သူနှစ်နာအောင် လုပ်ရာမှာ မဟုတ်ဘဲ သူ့ကိုမြင်ရင်…
စိတ်ရှည်မှု၊ ခွင့်လွတ်မှု၊ သီးခံမှုတွေနဲ့ သူ့ကိုနားလည်ပေးရမယ်…
ဒီလိုနားလည်းပေးလိုက်လို့ သူ့ဖက်ကရန်ပြုနေလျှင် ဆိတ်ဆိတ်နေတော်မူပြီး
မိမိလိုရာခရီးကို ခုန်ပျံ ကျော်လွှားပြီး ခရီးဆက်လိုက်ပါ….
kai says: လူတွေကို (ကိုယ်အပါအ၀င်) ကွန်ပြူတာတွေလို့.. သဘောထားနိုင်ရင်.. တော်တော်စိတ်ချမ်းသာနိုင်သဗျ..။
တကယ်လည်း.. လူဆိုတာ.. ဆင်မြုလိပ်လုပ်ထုတ်နေတဲ့.. ကွန်ပြူတာတမျိုး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Thint Aye Yeik says: လူတိုင်း….မိုက်ခရိုဆော့ဖ် သူဌေးကြီးတွေ ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် ကြောက်စရာ ကောင်းမသွားပေဘူးလား။
Foolish Girl says: skip လုပ်ရမှာပေါ့နော်
အောင် မိုးသူ says: ဆိုက်ကိုတွေနဲ့ များကြီးဆိုင်တယ်။
uncle gyi says: ဂုဏ် မာန်မာန ငါ တွေလျော့ ချနိုင်ရင် အေးငြိမ်းတာပါပဲဗျာ
kotun winlatt says: သည်းခံခြင်းသည် အောင်မြင်ရာ၏လို့တော့ ဖတ်ဘူး မှတ်ဘူးတာပါပဲ . . . လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ သည်းခံတာများရင် လူအလို့ထင်သွားတတ်လို့ တစ်ခါတစ်လေ နဂါးမှန်းသိအောင်တော့ အမောက်ကလေးလဲ ထောင်ပြတတ်မှ အဆင်ပြေတာခင်ဗျ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဘဝဆိုတာ